गोरखामा राजा छनोट गर्न लिगलिगे दौड प्रतियोगिता हुने, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
गोरखामा राजा छनोट गर्न लिगलिगे दौड प्रतियोगिता हुने
गोरखा । गोरखामा राजा छनोट गर्न यही असोज २८ गते लिगलिगे दौड प्रतियोगिता हुने भएको छ।
लिगलिगकोट विकास अभियानले सदरमुकाममा आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी लिगलिगे म्याराथन २०७५ को तयारी तीव्र रुपमा अघि बढेको जनाएको छ।
विसं १६०४ देखि शुरु भएको मानिने सो दौड विगत नौ वर्षदेखि हुँदै आएको छ। अभियानका अध्यक्ष पूर्णबहादुर रानाले विगतका वर्षमा जस्तै गोरखाको लिगलिगकोटको ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वलाई चिनाउन प्रतियोगिता गर्न लागिएको जानकारी दिए।
सो दौड चेपे र मस्र्याङ्दी नदीको दोभानबाट शुरु भई ढिकीडाँडा, ठाँटीपोखरी, पानी ट्याङ्की, छापथोक, बडडाँडा, बोहोरागाउँ, सभा चौतारो, मैबल, दर्बेपानी, बिजुलीडाँडा, खोली चौतारोदेखि लिगलिगकोट गढीसम्म पुगेर अन्त्य हुने छ।
१३.८ किलोमिटर दूरी पार गर्नुपर्ने उक्त प्रतियोगितामा पहिलो हुनेलाई नगद ६० हजार १०० को साथमा श्रीपेच, पगरी, ट्रफी र लिगलिगकोट राजदूतको ब्याच प्रदान गरिने रानाले जानकारी दिए।
साथै प्रतियोगिताको उपाधि विजेतालाई एकरात लिगलिगमा राजाका रुपमा राखिने र मोटरमा चढाएर नगर परिक्रमा गरिने उनले बताए। त्यस्तै दोस्रो हुनेलाई नगद ३५ हजार र तेस्रो हुनेलाई नगद रु २५ हजारको साथमा सम्मान गरिने छ।
नवौँ स्थानसम्म प्राप्त गर्ने सहभागीलाई विशेष पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको आयोजकले जनाएको छ। स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकले भाग लिन पाउने सो प्रतियोगितामा नेपालीलाई दर्ता शुल्क १ हजार र विदेशीलाई ५ हजार लाग्ने छ।
प्रतियोगिता सम्पन्न गर्नका लागि कूल २८ लाख ५५ हजार लाग्ने अनुमान गरिएको छ। बडडाँडादेखि लिगलिगकोटसम्मको ५ किलोमिटर दूरीको महिला खुला दौड प्रतियोगितासमेत हुनेछ।
सो दौडमा पहिलोले २० हजार ५, दोस्रो हुनेले १२ हजार ५ र तेस्रो हुनेले ७ हजार ५ रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्।रासस